UDrew Scott Ukwabelana ngeFoto yoBuntwana ethandekayo yaKhe kunye nabantakwabo - Indlela Yokuphila
UDrew Scott Ukwabelana ngeFoto yoBuntwana ethandekayo yaKhe kunye nabantakwabo
UGregg DeGuireImifanekiso kaGetty
Ngaphambi UDrew noJonathan Scott babenjalo Bazalwana bePropati , babengamawele nje bekhula eVancouver, Canada. Uthando lwabo lokunceda abanye kuyilo luqale xa babeneminyaka esixhenxe kuphela ubudala kwaye bazenzele ishishini labo elincinci apho benza khona iihanger ezogqunywe yinylon Kodwa njengokuba uDrew noJonathan benza isibini esikhulu njengabantwana (kwaye ngokucacileyo nanamhlanje!), bayinxalenye yesithathu esimangalisa ngakumbi. Ubhuti wabo omdala, JD Scott , onokumkhumbula Mzalwana vs Mzalwana ( ahem , bukela i-trailer yexesha lesixhenxe Apha ! ) Kwakukho kwaye kuhlala kukho ukubonisa ii-bros zakhe ezincinci iintambo.
Lo mxholo ungeniswe kwi-Facebook. Unokwazi ukufumana umxholo ofanayo kwenye ifomathi, okanye unokufumana ulwazi oluthe kratya, kwiwebhusayithi yabo.
NgoMgqibelo, u-Drew Scott uthathe amajelo eendaba ezentlalo ukuba athumele umfanekiso omnandi wokuphosa kunye nefoto yakhe yangoku, JD, noJonathan. 'Ezinye izinto azitshintshi,' u-Drew wabhala kwi-caption. 'Sobathathu sikunye bekusoloko kuyindlela yokuhleka! #uthando . '
iikhabhathi zasekhitshini kunye neembono zokubala
Kwifoto yokuqala, ubona abazalwana benikezela ngokugqibeleleyo iimpahla ezinxibeleleneyo ngombala kunye nokuhlafuna nzima kakhulu (ndinomzingeli wokuba umama wabo, uJoanne Scott, ababekele ezi mpahla). Ukusuka ekhohlo ukuya ekunene, uJonathan unxibe ijezi enebhulukhwe yaselwandle kunye neblukhwe, uJD unxibe ijezi emhlophe kunye negrey enekhola ebomvu nebhulukhwe ye-beige, kwaye uDrew unxibe ijezi emhlophe enekhola ebomvu nebhulukhwe ye-beige. Zonke ezi zambatho zintathu ziyancedisana kwaye amakhwenkwe azaliswe yimincili. Emva koko, cofa kumfanekiso olandelayo kwaye uza kubona amadoda akhule ngoku ... kwiilt kwaye axhotyiswe ngemibhobho.
Uyilo loyilo lodonga kwigumbi lokulala
Ngelishwa, uDrew akazange afake ividiyo yabazalwana xa besenza imibhobho ( Bona uDrew udlala imibhobho emva kwi2013 ), Kodwa kutshanje unike abalandeli ukuba bajonge ezakhe iitalente zomculo. Kwiveki ephelile, wabelane ngevidiyo yakhe esenza 'Yama kum' . Uye wasivuyisa nale vidiyo imnandi NgoSuku lukaBawo lokucula nokudlala isiginci notata wakhe . Ukuba usibuza, abazalwana baseScotland bangamadoda okwenyani kwaye sihlala silinde ukubona ukuba bazakusothusa ngantoni ngokulandelayo.
I-avenue ye-euclid esemazantsi engama-7436
Izimvo zonyango lwefestile ekhitshini
phakathi kwenkulungwane yekhulu
ekwindla ebusika 2018 umbala weendlela